SaaS Companies Excel amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa. Azonao atao koa ... Ary Ity ny Fomba | Martech Zone
Ny rindrambaiko dia tsy fividianana fotsiny; fifandraisana izany. Rehefa mivoatra sy manavao ny vaovao izy mba hihaonana amin'ny takian'ny teknolojia vaovao dia mitombo ny fifandraisana misy eo amin'ireo mpamatsy rindrambaiko sy ny mpampiasa farany — ny mpanjifa — satria mitohy ny tsingerin'ny fividianana maharitra. Rindrambaiko-toy ny serivisy (SaaS) Matetika ireo mpanome tolotra dia miavaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba ho tafavoaka velona satria miditra amin'ny tsingerin'ny mividy maharitra amin'ny fomba mihoatra ny iray izy ireo.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara dia manampy amin'ny fiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, mampiroborobo ny fitomboana amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy sy ny referansa am-bava, ary manome fahatokisan-tena an'ireo mpampiasa hanitatra ny fifandraisan'izy ireo amin'ny alàlan'ny serivisy fanampiny sy ny fahaizany. Ho an'ireo mpamatsy SaaS mirotsaka amin'ny sehatry ny B2B, mety hidika izany fa maro ny seza sy fahazoan-dàlana fanampiny, avy amin'ny mpanjifa tokana izany.
Ao amin'ny toekarena serivisy mifaninana ankehitriny, ny fanohanan'ny mpanjifa miavaka dia mety ho mpanavaka marika lehibe indrindra azy rehetra. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ireto misy torohevitra vitsivitsy sarobidy avy amin'ny saaS sahan:
1. Aza avela ny tsara (tahiry vola) ho fahavalon'ny tonga lafatra (fahafaham-po ny mpanjifa).
Tanjona mendrika tokoa ny hitazonana ny vidiny. Raha atao an-tsakany sy an-davany anefa dia mety hiteraka fanapahan-kevitra ratsy eo amin'ny orinasa izany.
Maro ny hetsiky ny serivisy ho an'ny mpanjifa no niezaka nitantana ny fandaniana tamin'ny alàlan'ny fampidirana am-paosy ny fanohanan'ny mpanjifany, miaraka amin'ny fihenan'ny mpanjifa vokatr'izany. Ny sasany kosa nametraka safidim-panompoana bebe kokoa, izay mety ho fanamaivanana ny teny hoe "vakio ity lahatsoratra ity, ary fantaro izany," fa ny mpamatsy SaaS dia manam-pahaizana amin'ny fahatakarana habe iray tsy mifanaraka amin'ny rehetra. Mety ho tsy maninona ireo millennial manam-pahaizana amin'ny teknolojia sy ny Gen Zers amin'ny safidin'ny serivisy an-tserasera, fa ny Gen X sy ny mpanjifa boomer zaza izay aleony mampiasa telefaona dia mihevitra ny fanompoana-tenany ho fomba mora hanafoanana ny fifandraisan'ny olombelona mivantana.
Ireo fikambanana manohana izay manandrana mamerina manitsy ny fanambin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny famerana ny faharetan'ny fifandraisana dia diso ihany koa ny hevitra. Amin'ny alàlan'ny famporisihana ireo agents hampihena ny fotoana laninao isaky ny antso, chat, hafatra, na mailaka, dia mora ny tsy mahazo tsara na tsy miraharaha ny filan'ny mpanjifa. Ny traikefa tsy dia matetika no vokany.
Zava-dehibe ny fankasitrahana ny maha-zava-dehibe ny fihaonana kalitao amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa maharitra, indrindra ao anatin'ny tsingerin'ny fividianana maharitra. Mandra-pahatongan'ny orinasa mitaky ny sandan'ny churn, ny fahaverezan'ny fahatokisana ary ny fahasimban'ny lazan'ilay marika, ny fitehirizana vola fohy dia hitohy handresy ny fahombiazana maharitra.
2. Ataovy lohalaharana ireo mari-pamantarana roa ireo.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny mpanohana tsara dia mifantoka amin'ny metrika vitsivitsy: indrindra:
Haingam-pandeha ho an'ny valiny - metric (zavatra toy ny hafainganam-pandeha havaliny, na MITOVY AMIN'NY), izay azo refesina amin'ny sehatra fanohanana maoderina; ary ny iray mifantoka amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, miaraka amin'ny metrika voaangona tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana haingana taorian'ny fifandraisana. Ny fotoana valin'ny valiny dia barometrika iray hanamorana ny fahafaha-miditra, fidirana ary fahafaham-po, noho izany dia tokony ho haingana araka izay azo atao ny valiny.
Isa afa-po amin'ny mpanjifa - miaraka amin'ny fanehoan-kevitra maimaim-poana, asehoy raha mila ny kalitaon'ny serivisy amin'ny ankapobeny ny mpanjifa (QoS) nihaona. Raha tokony hitsara fahombiazana amin'ny alàlan'ny fandrefesana ohatra fanapahan-kevitra mikasika voalohany ary ny faharetan'ny antso — izay azo ampiasaina mora foana ary amin'ny farany tsy mamaritra ny QoS — Mahita fahombiazana ny mpamatsy SaaS amin'ny fandrefesana ny ASA ary ny fahafaham-po amin'ny ankapobeny.
3. Hevero ho toy ny reninao amin'ny telefaona ny mpanjifa.
Empathy dia ampahany lehibe amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Alao an-tsaina hoe ny reninao na olona akaiky anao amin'ny telefaona; tianao ny hamaly avy hatrany ny foibe mpanohana (na omeo azy ny safidy handraisana antso miverina). Ianao koa dia maniry ny handehanan'ny maso azy amin'ny dingana tsirairay amin'ny vahaolana amin'ny faharetana sy fangoraham-po, na dia midika izany aza ny firesahana azy amin'ny rohy fandefasa-tena. Farany, tianao ny hanome azy ny fotoana rehetra ilainy ilay agents, na dia mandany lasibatra maharitra aza ny antso.
Anontanio ny mpitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa any amin'ny orinasa SaaS rehetra ary hanaiky izy ireo fa ny fanofanana momba ny fahaiza-manao rindrambaiko ho an'ny mpiasa mpanohana ny mpanjifa dia tsy hoe finaritra-hanana fotsiny; fa ilaina izany. Na dia tsara aza ny fiofanana momba ny maso ivoho ny orinasa ary mihoatra ny salan'isa ny isa ASA, ny fitondrana ny mpanjifa rehetra toa ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia hahatonga ny mpampiasa hahafantatra momba ny marikao ambonin'ny antony hafa rehetra.
4. Mampiroborobo ny masoivohonao amin'ny departemanta hafa
Ny fisarihana anatiny dia tokony ho metrika manambara indrindra ny fahombiazan'ny fanohanan'ny mpanjifa. Raha mampiroborobo ny mpandraharaha serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra amin'ny faritra hafa ao amin'ny fikambanana ny orinasa iray dia midika izany fa tsy fampiofanana tsara fotsiny fa koa fanomezana lalana an'ireo mpiasa ireo.
Ny sampana serivisy ho an'ny mpanjifa marani-tsaina dia tsy matahotra ny hamela ny masoivohony hifindra amin'ny varotra, antoka ara-kalitao, fampandrosoana ny vokatra na fitsipi-pifehezana hafa. Midika izany fa ireo agents ireo dia nianatra ny marika ary koa ny tanjaka sy ny fahafaha-mivoatra amin'ny fivoahana eo alohan'izy ireo. Amin'ny maha diplaoman'ny "rafitry ny fambolena" an'ny orinasa azy ireo dia manana fomba fijery sy fahazarana sarobidy izay omena lanja mandritra ny asa izy ireo.
Avereno jerena izay zava-dehibe tokony hitondrana fahombiazana (mpanjifa)
Tian'ireo mpandraharaha ny miteny hoe: "Izay azo refesina dia voatazona." Amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa kosa, izay mazàna refesina dia mahazo fitaovana. Ireo mpamatsy SaaS dia mahay misoroka ny fandriky ny fandrefesana satria fantatr'izy ireo fa ny fampiharana dia manalavitra ny mpanjifa fa tsy mankany aminy.
Tontolo iray mihamahazo vahana hatrany izy io, ary ny mpanjifa dia manome lanja ny traikefa amin'ny zavatra hafa rehetra. Ny fomba itondran'ny orinasa ny mpanjifany farafaharatsiny manan-danja indrindra amin'ny vokatra amidiny. Ireo mpivarotra lozisialy dia mety mivarotra ny voalohany S in SaaS, fa raha te hahomby dia tokony ho tompony amin'ny faharoa S. Izany no fiheverana fa ny orinasa rehetra — ary ny mpanjifa rehetra — dia tena hankasitraka.
Tags: Mitovy amin'nyhafainganam-pandehan'ny valinyhafainganam-pandehan'ny valinyb2blazan'ny marikampanjifa tsy mivadikafitazonana ny mpanjifaSerivisy ho an'ny mpanjifahetsiky ny serivisy ho an'ny mpanjifafahombiazan'ny mpanjifavahaolana voalohany-mikasikampanjifa maharitrakalitaon'ny serivisysaasServicerindrambaikorindrambaiko ho serivisy
Andy Mickelson no filoha lefitry ny fanohanan'ny mpanjifa Vertafore, mpamatsy teknolojia fiantohana malaza. Ao anatin'ny andraikiny dia VP mifantoka amin'ny mpanjifa izy izay manana fahaizana manokana amin'ny fananganana fanapahan-kevitra azo refesina, ekipa manana hazakazaka avo lenta ary fomba fanao tsara atrehin'ny mpanjifa.